Ngwọta maka whitefly na okooko osisi ime ụlọ: Teppeki, Tanrek, Aplaud na ndị ọzọ, na-akwadebe ahụhụ ụmụ ahụhụ ma na-emeso ha osisi - Isiokwu - 2020
N'ụzọ dị mwute, ihu igwe na-ekpo ọkụ na mmiri ozuzo na-eme ka ọ bụghị naanị na-eto eto. A na-arụ ọrụ pests ndị ọzọ, karịsịa whitefly.
E nwere ụzọ dị iche iche a ga-esi na-emeso ya, ma ha adịghị enyere aka mgbe niile, mgbe ahụ, ọgwụ ndị na-enyere aka - ụmụ ahụhụ.
Ọzọ, gwa gị ụdị ahụhụ, nsogbu dị na ya. Mgbe na ihe kpatara ya. Ọzọkwa, olee usoro nchịkwa na mgbochi.
Gịnị na-afụ ụfụ?
Kedu ka esi achọpụta na ọ na-ebi na okooko osisi n'ime ụlọ?
Ihe kpatara nke
Ọgwụ ọjọọ ịlụ agha
Nkwadebe nke ngwọta na nhazi
Nke a bụ obere ahụhụ na-aṅụ aṅụ, dịka ahumachi, ihe dị ka 1.5-3 mm n'ogologo, nke nwere nku abụọ na-acha ọcha na-ekpuchi ya. Whitefly larvae na-achọ ebe kwesịrị ekwesị maka nri na ala ala nke akwụkwọ ahụ, na-etinye onwe ya na ya ma dọọ akwukwo ahụ iji nweta ihe ọṅụṅụ pulp. Ndị okenye na-eri nri na akwukwo akwukwo.
Obere ahụhụ a na-akpata ọtụtụ nsogbu, karịsịa na griin haus:
ya na proboscis bu akwukwo ahihia, nwere ike ibute ọnya;
na-akwalite mmepe nke nsị nsị nke na-etolite nkume ojii ma na-eduga na ọnwụ nke akwukwo;
na-eme ka osisi ghara imebi ma mebie photosynthesis ya, akwụkwọ ya na-acha odo odo, na-eme ka ọ ghara ịnwụ.
N'elu elu nke epupụta enwere oge na-egbukepụ egbukepụ (honeydew) - ndị a bụ ihe ndị na-ere ọkụ nke whitefly. Ngwurugwu soot na-etolite na mwakpo a - nke a na-ahụ dị ka ntụ ojii. Ọ bụrụ na ị na-eme ka epupụta ahụ, ọtụtụ ụmụ ahụhụ na-acha ọcha ga-efere ha.
Akwụsị na-apụta n'ogige n'okpuru ọnọdụ ndị a:
Ọkụ (site na 15 Celsius C na n'elu) na mmiri ihu igwe. Ọ bụrụ na okpomọkụ dị n'okpuru 10 Celsius C, ụmụ ahụhụ na larvae anwụọ, ma àkwá na-anọgide.
Mmiri dị egwu na enweghị ike ikuku.
Akwukwo a na-emetọ ala.
Maka mbibi nke ụmụ ahụhụ na-eji chemical pụrụ iche - ụmụ ahụhụ:
eriri afọ - banye n'ime ahu nke umu ahụhụ na ihe osisi osisi;
kọntaktị - gafee akpụkpọ ahụ;
systemic - mee ka ụmụ ahụhụ na-egbu osisi, na-abanye mgbọrọgwụ, akwụkwọ na arịa;
fumigants - banye n'ime akụkụ iku ume nke ụmụ ahụhụ.
E nwere ọtụtụ ụdị ụmụ ahụhụ megide whitefly, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-eme ihe n'usoro, kọntaktị-nsia.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-eji ọgwụ ọjọọ niile eme ihe, ị ga-eyi uwe, mkpuchi ma ọ bụ respirator na ihu na globa. Na-asa aka mgbe ị na-arụ ọrụ na ncha na mmiri.
Mmiri mmiri na-edozi mmiri, na-ere ya na 1-1.5 ml ampoules, 10, 50, 100 ml karama na 1 l Mkpọ. Ahịa: site na 12-15 rubles kwa ampoule ruo 250-280 rubles kwa kalama.
Ọ na-eme na nhụjuanya usoro nke ụmụ ahụhụ, na-akpata nrịanrịa na ọnwụ.
Gbanyụọ ego a chọrọ n'aka Tanrek na 1 liter nke mmiri oyi, wee weta ụda a chọrọ.
N'iji ọgwụ ọjọọ ahụ na-arapara na epupụta, ị nwere ike itinye aka na ngwọta nke ncha ncha.
Kwadebe ihe mkpocha nke a na-eji ya eme ihe.
A ghaghị iji ihe ngwọta mee ihe n'ime ụbọchị abụọ. Tanrek na-etinye aka n'ime awa 2 n'ime ị ga-esi na ya pụta, na-egbu ọtụtụ n'ime larvae nke whitefly ahụ. Ndị ọzọ na-anwụ n'ime ụbọchị 3-5. Ịdị irè nke ọgwụ ahụ nọgidere na-echere izu 3 na epupụta na ị ga, ruo ọnwa isii - n'ala.
na-eme ngwa ngwa, mgbe ebuteghi mmiri ozuzo;
na-echebe osisi ruo ogologo oge, n'ihi ya ị nwere ike igbochi otu ọgwụgwọ.
Mbelata ahụ bụ nsi maka ụmụ mmadụ na aṅụ.
Imirikiti ụmụ ahụhụ megide whitefly belata nrụpụta ọrụ na anyanwụ.ya mere ọ ka mma ịkụ osisi ahụ na igwe ojii.
Ngwongwo mmiri na-edozi mmiri n'ime karama plastik nke 0.14; 0.25; 0,5; 1 n'arọ Ahịa: site na 2700 rubles maka 0.14 n'arọ ruo 9000 rubles maka 0,5 n'arọ.
Na ederede. Ọ na-abanye n'ime epupụta ma gbasaa ngwa ngwa na ha, ụmụ ahụhụ na-ebute oria na nkwụsị ha na-akwụsị inye nri ma nwụọ.
Usoro dị otu maka Tanrek. Ọ na-amalite ime ihe dị ka ọkara elekere elekere., ụmụ ahụhụ nọgidere na-anwụ maka ụbọchị ise. Mgbe nhazi ya dị mkpa ka amụma ahụ dọọ gị aka - ọ bụrụ na mmiri ozuzo na-ezo n'ime awa ndị na-abịa, ọgwụ ahụ ga-akwụsị ịrụ ọrụ.
Ogologo oge mmetụta nsi bụ otu ọnwa. Ị nwere ike ijikwa ugboro atọ kwa oge na oge dịkarịa ala otu izu.
obere ọnụ ọnụego;
mmetụta dị ala gburugburu ebe obibi, obere ihe ize ndụ nye aṅụ.
Minus - arụmọrụ na-adabere n'ọnọdụ ihu igwe.
Nke a na-eri ahụhụ nwere ihe ndị na-ere ọkụ nke microorganisms ala. Na-ere n'ụdị nke emulsion na ampoules nke 2, 4, 10 ml, na karama nke 400 ml na 5 l canisters.
Ihe mejupụtara ahụ nwere ihe dị egwu nke na-enyere aka na Fitoverm na osisi ahụ. Ọnụahịa: site na 10 rubles kwa mkpọ nke 2 ml na 2,700 rubles maka 5 l.
N'ihi ọgwụgwọ na Fitoverm, whiteflies na nkwụsị ha na-akwụsị nri ma nwụọ.
A na-edozi ihe ngwọta n'otu ụzọ ahụ si na Tanrek.
Ịgba ọkụ, ọbụna wetting epupụta, na akọrọ, na-ekpo ọkụ (20-25 Celsius C) na jụụ ihu igwe maka 8-10 awa tupu ịgbara ma ọ bụ mmiri ozuzo anya.
Mgbe awa 6-12 gachara ọgwụgwọ, ihe oriri nke ọcha na-akwụsị, mgbe ụbọchị 2-3 gasịrị, ha anwụọ. Arụmọrụ na-adị ruo izu atọ.
adịghị emerụ gburugburu ebe obibi, ngwa ngwa na-adaba na mmiri na ala;
ọ ga-ekwe omume ịnakọta mkpụrụ n'ime ụbọchị 2 mgbe a gwụchara ya.
mgbe ikuku ikuku na-adaba ruo 15-17 Celsius C na mgbe mmiri ozuzo gasịrị, toxicity na-ebelata nnọọ njọ;
dị ize ndụ maka aṅụ;
ike siri ike.
Ọ dị mkpa! Otutu umu ogwu eji eme ihe megide whitefly bu ihe di ize ndu nye aṅụ, n'ihi ya, ha na akwado ha ka ha jiri ha mee ihe n'elekere mgbe umu anumanu a adighi efe - n'ututu tupu elekere iri ma obu n'uhuruchi ka elekere iri na ano.
Ọ bụ ekwesighi ịhazi osisi n'oge okooko. N'ụlọ ọrụ ugbo, a na-ekwe ka iji ụmụ ahụhụ mee ihe n'ebe dị anya nke na-adịghị nso karịa 4-5 kilomita site na bee hives.
Ngwongwo mmiri nke nwere mmiri na akpa nke 1 na 5 g ma ọ bụ karama 500 g Ahịa: site na 27 r kwa 1 g ruo 12 000 r kwa paụnd. Ọ na-emetụta usoro ụjọ nke whitefly, na-akpata nrịanrịa na ọnwụ.
Igbari 1-2 g nke ọgwụ na 100 ml mmiri.
Mgbe ahụ, a na-atụgharị ngwọta na-esi na bọket mmiri.
Enweghị ike ịchekwa ngwaahịa ahụ agwụ, a ghaghị eji ya maka otu ọgwụgwọ. Ọ na - amalite ịrụ ọrụ mgbe otu elekere, nke kachasị ike - n'ụbọchị nke abụọ mgbe ọ gasịrị. A na-arụ ọrụ site na izu abụọ ruo otu ọnwa.
nọgidere na-eme ọbụna mgbe mmiri ozuzo gasịrị, na-eguzogide ọgwụ ike;
enwere ike iji ya na ihu igwe;
enweghị ọgwụ ọjọọ na osisi ndị gbara ya gburugburu.
Minus - dị ize ndụ maka aṅụ.
Ngwongwo mmiri na-edozi mmiri na ngwugwu site na 4 g na 1 n'arọ. Ahịa: site na 120 rubles maka 4 g ruo 2350-3100 rubles maka 250 g na 11,700 maka 1 n'arọ.
Ube nke whitefly na usoro nke nri na-emetụta, banye n'ime epupụta stalks nke osisi site na arịa, na-adịghị abanye mkpụrụ.
A na-agbaze nsogbu ahụ na mmiri ọkụ (8 g kwa 10 l). Tinye Aktaru ọ bụghị naanị na ị na-atụgharị na epupụta (mmetụta nchedo - ụbọchị 15-30), kamakwa maka ịmịanye mmiri n'okpuru mgbọrọgwụ (ụbọchị 40-60 n'ime ala n'elu larvae nke whitefly). Mmetụta kachasị na-egbu egbu sitere na awa 20 ruo ụbọchị 3 mgbe a gwọchara ya.
Lezienụ anya! Ọgwụgwọ a ugboro ugboro mgbe ụbọchị 10-12 gasịrị.
na-eme ka arụmọrụ na-egbuke egbuke na anyanwụ na-enwu gbaa na mgbe mmiri ozuzo gasịrị;
ọ naghị anụ ísì;
enweghị ihe ize ndụ nye ụmụ mmadụ ma ọ bụ anụmanụ.
Nri - eri ahụ na-eme mgbe a na-agwọ ọrịa ugboro ugboro.
Na emulsion iche na ampoules nke 2 ml ma ọ bụ na Mkpọ nke 5 lita. Ọnụahịa: site na 220 rubles kwa 50 ml kalama na 17,500 rubles maka 5 l canister.
Nke a na-agwọ ọrịa nwere ma ntanye-ịchọta (na usoro nri) na fumigant (vapors nke ọgwụ ịdaba na ahụhụ chitin integument). Ọ na-abanye n'ime akwụkwọ, na-amị mkpụrụ na mkpụrụ osisi.
Ihe dị n'ime ampoule ahụ jupụtara kpamkpam na 100 ml mmiri.
Mgbe ahụ kwadoro ego a chọrọ.
Ejiri ya na karama.
Ị nwere ike iji naanị ngwọta dị njikere. Ọgwụ ọjọọ amalite ịme ngwa ngwa - mgbe minit 10 gachara ruo awa isii. Ọnwụ na-anọgide ruo izu 2. Ị nwere ike iweghachi osisi mgbe izu.
Ọzọ - n'ihi na ime ihe abụọ nwere ike ịbịaru ike iru ebe.
ike siri ike;
belata na mmiri ozuzo;
egbula mkpụrụ n'ime izu atọ mgbe a gwọchara gị;
dị ize ndụ maka aṅụ.
Nke a bụ kọntaktị na kọntaktị na ihe ọzọ na-eme ka ọ bụrụ ntụ ntụ na ngwugwu 500 g. Ọnụ ọgwụ ọjọọ: 2400 rubles maka 500 g.
Ịbanye n'ime ahụ nke whitefly larvae, na-emetụta n'ụzọ dị njọ na e guzobere chitin, n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla a na-ahụ na ọ na-anwụ anwụ. Na-egbochi iwepụ caterpillars si àkwá.
Kwadebe otu ihe ahụ dị ka Tanrek. Ọrụ na mkpịsị ụkwụ adịghị ozugbo - n'ime otu izu. Ọ dị mkpa iji ọkụ na-agba n'ime izu 2 mgbe ụdị whitefly na-acha ọcha - dịka n'oge a ka larvae ọkpụkpụ. Ọnwụ na-adịgide ruo ụbọchị 25. O kwere omume iji mepụta nhazi ugboro ugboro n'otu ọnwa.
adịghị eme ka pests ghara ịba ahụ;
nwere mmetụta ọzọ na-egbu egbu ma ọ bụrụ na e si na epupụta pụta;
nchekwa maka ụmụ mmadụ, anụ ụlọ, osisi gbara gburugburu, aṅụ na azụ.
Minus - elu price.
Aqueous uche na ampoules nke 3-9 ml. Ahịa: site na rubles 20 maka 3 ml 75 rubles maka 9 ml.
Ụkpụrụ nke ọrụ bụ otu ihe ahụ nke Tanrek na Confidor. (otu ihe na-arụ ọrụ).
Kwadebe otu ihe ahụ dị ka Aplaud.
Ọ dị mkpa! Jiri naanị ngwọta dị njikere.
Na-agba akwụkwọ ndị ahụ n'èzí na n'ime ya, nakwa dị ka ị ga-etinye 6 awa tupu ịgbara mmiri. Mmiri na-amalite ịnwụ mgbe awa 2 gasịrị, oge nke ọrụ kasịnụ nke Biotlin - ruo ụbọchị 3. Mmetụta nchebe nke ọgwụ ahụ dị ruo ụbọchị 20.
ọ bụghị nro.
Mbelata ahụ dị ize ndụ maka ụmụ ahụhụ bara uru: aṅụ na earthworms, nakwa maka azụ.
Ihe ndị a bụ akwụkwọ edo edo edo nke nwere akụkụ 25 × 40 cm, nke a na-eji gluu pụrụ iche na akụkụ abụọ. Ọnụahịa: 80 rubles kwa ibe.
Gbakwunye osisi dị elu nke 20 cm (1 ọnyà kwa 10 sq. M) na mmalite nke oge na-eto eto, ka ha na-etolite, ha anaghị adị elu. A na-adọta ụlọ ahụhụ na-acha ọcha nke plastik, ha na-efeba na ọnyà ma na-arapara na ya.
mfe nke iji.
Minus - arụmọrụ na-abụghị ntụziaka.
A na-erere onye ọrụ a (20% emulsion) n'ahịa ahịa (a na-eji ya eme ihe). Ọnụahịa: maka 200 ml 134 rubles.
Otu tablespoon (20-50 ml) diluted ke 1 liter mmiri.
Na-agba akwụkwọ ndị ahụ n'akụkụ abụọ.
Na ederede. Achịghị nhazi.
Mụtakwuo otu esi achichapu whitefly n'elu osisi ndị ahụ, akọwapụtara ebe a, na n'isiokwu a, ị nwere ike ịmụta banyere otu esi merie ahụhụ a na saịtị ma ọ bụ na griin ha.
Ikwesighi iji chemicals ma ọ bụrụ:
emela ka ọdịda ahụ banye;
Ejila mmiri na-edozi mmiri na mmiri oyi;
akwalite ahụike osisi na biostimulants na nri.
E nwere ọtụtụ ọgwụ ọjọọ megide whitefly, ha niile dị irè, ma, ọ dị mwute ikwu, na-emerụ ahụ gburugburu ebe obibi. Ya mere, a ghaghị iji ya ma kpochapụ ya dịka ntuziaka.